Dowlada Britain oo Malaayiin Dollar ku maalgalineysa Dekad kutaala Soomaaliya | Allbanaadir.com
Home NEWS Dowlada Britain oo Malaayiin Dollar ku maalgalineysa Dekad kutaala Soomaaliya
Dowlada Britain oo Malaayiin Dollar ku maalgalineysa Dekad kutaala Soomaaliya
Shirkadda weyn ee dekedaha Dubai ee DP World iyo wakaaladda dowladda Brtitain u qaabilsan horumarinta maaliyadda ee CDC Group ayaa Talaadadii sheegay inay qorsheynayaan inay si wadajir ah kaabayaasha saadka ee qaqaradda Africa ugu maal-galiyaan illaa $1.72 bilyan dhowrka sano ee soo socda.
Maal-gashigaan ayay ku sheegeen inay ugu horreyso casriyeynta saddex dekedood, iyada oo marka hore diiradda lagu saari doonaa ballaarinta dekadaha ay maamusho DP World ee kala ah Ain Sokhna ee dalka Masar, dekada Dakar ee dalka Senegal iyo dekdada Berbera ee Somaliland, sida ay sheegtay CDC.
DP Word oo ay dawladdu leedahay ayay ka go’antahay inay maal-geliso $1 bilyan sannadaha soo socda, halka CDC ay ballan-qaadday $320 milyan oo ay suuragal tahay inay ku darto illaa $ 400 milyan oo maal-galin kale ah.
“Waxaan leenahay aragti isku mid ah inaga iyo DP World, taas oo ah inaan doonayno inaan maal-gashi ku sameyno dekado badan oo qaaradda oo dhan ah intii suurtagal ah,” ayuu Madaxa CDC Tenbite Ermias u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
Previous articleHanka Siyaasadeed ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo is badalay kadib go,aankii ICJ
Next articleMaleeshiyaad Hubeesan oo Istaajisay howlihii shaqo ee ka socday Dekadda Hobyo